सैमसंग देखि ASIC चिप्स को उत्पादन - Blockchain समाचार
सैमसंग देखि ASIC चिप्स को उत्पादन
Samsung cryptocurrency को खानी लागि ASIC चिप्स उत्पादन सुरु
यो बजार मा कम्पनी को मुख्य प्रतियोगी गर्न खानी उपकरण अप कमाता $ 400 लाख एक चौथाई मा.
दक्षिण कोरियाली सैमसंग ASIC चिप्स को उत्पादन मा लगे गरिएको छ, जो bitcoins को उत्पादन को लागि प्रयोग गरिन्छ, ethers र अन्य cryptocurrencies. कम्पनी को प्रतिनिधिलाई सन्दर्भ TechCrunch यो लेखिएको छ.
Samsung thecryptocurrency लागि अहिले व्यस्त विनिर्माण चिप्स छ. तथापि, we can not give more details about our customers. – samsung PressOffice
को Miners लागि चिप्स भन्दा सैमसंग को काम बारे पहिलो कोरियाई मिडिया द्वारा रिपोर्ट थियो. स्थानीय संस्करण अनुसार घन्टी, सैमसंग अर्धचालक संयंत्र ASIC चिप्स को ठूलो उत्पादन जनवरी मा सुरु 2018. स्रोत निगम पहिले नै चीन देखि एक अनाम कम्पनी को लागि खनन उपकरण को आपूर्ति मा सहमत छ भनेर भन्न.
सैमसंग को प्रतिनिधि को ASIC चिप्स मा काम को विवरण TechCrunch संग छलफल गर्न अस्वीकार.
प्रकाशन सैमसंग ताइवानी माइक्रोचिप निर्माता TSMC संग प्रतिस्पर्धा गर्न छ टिप्पणी, जो देखि खानी लागि उपकरण मा कमाता $ 350 मिलियन $ 400 लाख चौथाई लागि. कम्पनी Bitmain र कनान रचनात्मक रूपमा खानी उपकरण यस्तो प्रमुख आपूर्तिकर्ता गर्दछ.
को परिणाम निम्न 2017, Samsung सबै भन्दा ठूलो चिप निर्माता भयो, इंटेल को नेता को स्थिति देखि displacing. Samsung गरेको माइक्रोचिप उत्पादन मा व्यापार 2017 थियो $ 69 अरब इंटेल गरेको तुलना $ 62.8 अरब.
नयाँ blockchain ETF एल ...
अघिल्लो पोस्ट:स्विट्जरल्याण्ड मा एक IČO कसरी सञ्चालन गर्न